Hunter: Ungalithola Kanjani Ikheli Le-imeyili Lokuxhumana le-B2B Ngemizuzwana | Martech Zone
Kunezikhathi lapho udinga ngempela ukuthola ikheli le-imeyili ukuze uxhumane nozakwenu ongenalo ebhukwini lakho lamakheli. Ngihlala ngimangele, isibonelo, bangaki abantu abane-akhawunti ye-LinkedIn ebhaliswe ku-a siqu ikheli le-imeyili. Sixhumekile, ngakho ngiyababheka, ngibathumele i-imeyili… bese ngingatholi mpendulo. Ngizodlula kuzo zonke izixhumanisi zemiyalezo eqondile kuzo zonke izingosi zokuxhumana futhi impendulo ekugcineni… "O, angilokothi ngihlole lelo kheli le-imeyili." Doh!
Hunter: Thola Professional imeyili Amakheli
Isixazululo esisodwa esihle nesilula Hunter. Nsuku zonke, u-Hunter uvakashela izigidi zamakhasi ewebhu ukuze athole idatha yebhizinisi engasebenza. Njengezinjini zokusesha, zihlala zigcina inkomba yewebhu yonke futhi zihlela idatha engekho kunoma iyiphi enye isizindalwazi.
Hunter ikuvumela ukuthi uthole amakheli e-imeyili ochwepheshe ngemizuzwana futhi uxhumane nabantu ababalulekile ebhizinisini lakho. Ukusebenzisa i-Hunter, uvele ufake isizinda sakho bese uchofoza Thola amakheli e-imeyili.
Imiphumela ihlinzeka ngamaphethini avamile amakheli e-imeyili kanye nenani lemithombo ikheli le-imeyili elikhonjwe kuyo. Ungachofoza emithonjeni futhi ubone ukuthi idatha itholwe kuphi futhi nini:
Hunter futhi ikuvumela ukuthi:
Sesha ngegama – sesha ngegama, isibongo, noma esizindeni ukuze ubone ukuthi ikheli le-imeyili lomuntu othile lisohlwini.
Qinisekisa ikheli le-imeyili – faka i-imeyili bese uqinisekisa ukuthi bakholwa ukuthi ivumelekile noma cha.
Thola umbhali - thola amakheli e-imeyili ababhali ezihlokweni eziku-inthanethi.
Oxhumana naye ngamunye okhomba kuye Hunter ingezwa ku uhlu lokuhola futhi ungakwazi ukuphakela imikhankaso ye-imeyili ebandayo ngokuhlanganisa i-Google Office yakho noma i-akhawunti ye-imeyili ye-Microsoft. Kuyisici esihle njengoba empeleni sithumela i-imeyili kusuka endaweni yakho ye-imeyili. Ungakwazi ngisho nokwakha izifanekiso ezenzelwe wena ngokwakho kuyo.
Uma ubhalisa Hunter, inkundla imahhala ngokusesha okungafika ku-25 ngenyanga.
Thola Ikheli Le-imeyili Lochwepheshe
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Hunter futhi ngisebenzisa isixhumanisi sabo sobulungu kulesi sihloko.
Tags: b2bb2b ikheli le-imeyiliyakha uhlu lwe-imeyili olubandayoyakha uhlu lwe-imeyiliyakha uhlu lokuholai-imeyili ebandayoi-imeyili yokufinyelela ebandayoukubheka i-imeyili yesizindaikheli le-imeyiliisizinda sekheli le-imeyiliuhlu lwe-imeyliukufinyelela i-imeyiliamathemba e-imeyilithola ikheli le-imeyili lombhalithola ikheli le-imeyiliumzingeliukufinyelelaikheli le-imeyili lochwepheshesesha isizinda sekheli le-imeyiliqinisekisa ikheli le-imeyili